Imithetho Emisha Yokuhamba Okuphephile YaseHawaii kusukela namuhla: Owinile Ezokuvakasha - ngempela?
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha zaseHawaii » Imithetho Emisha Yokuhamba Okuphephile YaseHawaii kusukela namuhla: Owinile Ezokuvakasha - ngempela?
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba Ezintsha zaseHawaii • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ukukhishwa kwezindaba • Ukuphepha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Wtn
UJohn de Fries, Isikhulu Esiphezulu se-Hawaii Tourism Authority
IHawaii njengamanje inokwanda okuphezulu kakhulu okwake kwaqoshwa ezimweni ze-COVID emhlabeni, kodwa ivula amasango ezivakashi.
I-Hawaii manje yemukela izivakashi ngezandla ezimhlophe, ungakhathazeki nge-COVID.
Namuhla i-Hawaii Tourism Authority ikhiphe imihlahlandlela emisha elandelayo ye-Safe Travels Hawaii. Kubonakala sengathi iziphathimandla zaseHawaii ziyeka ukugcina izakhamuzi nezivakashi ziphephile. Izinkathazo zezomnotho manje seziza kuqala kunezempilo.
Njengenjwayelo i-Hawaii Tourism Authority kanye ne-CEO yayo u-John de Fries bebengatholakali ukuze kuphawulwe futhi nemibuzo.
The Ukuhamba Okuphephile e-Hawaii Uhlelo luhlala lusendaweni yohambo lwasekhaya lusuka ezwekazini lase-US kanye nezindawo zalo, kube nezinguquko ezibalulekile eziqhubekayo.
Ngokuvumelana neziqondiso ezivela kuCenters for Disease Control & Prevention, isikhathi esiyisibopho sokuzihlukanisa sabantu abafika eZiqhingini zaseHawaii abangagonyiwe ngokugcwele noma abangenawo umphumela wokuhlola ongemuhle wangaphambi kohambo sehlisiwe ukusuka ezinsukwini eziyi-10 ukuya kweziyisihlanu. izinsuku, zisebenza namuhla, Januwari 3, 2022.
Ngaphezu kwalokho, kusukela ngomhlaka-4 Januwari, abahambi ngeke kudingeke ukuthi bagcwalise Uhlu Lwemibuzo Lwezempilo Lwe-Safe Travels ngaphambi kokuhamba ukuze bathole ikhodi ye-QR.
Azikho izimfuneko ezengeziwe ze-State of Hawaiʻi kubagibeli abandizela ngokuqondile e-Hawaii besuka endaweni yamazwe ngamazwe ngenxa yezidingo zombuso wase-US ezikhona njengamanje.
Siyakwazisa ukwesekwa kwakho nosizo ekugcineni i-Hawaii iphephile. Ukuze uthole ulwazi lwakamuva, sicela uqondise izivakashi zakho kuzo https://hawaiicovid19.com/travel/.